Ezine zoNxibelelwano eziSebenzayo zeTekhnoloji yokuQalisa | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 6, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 29, 2014 UAdam Omncinci
Ukudibanisa ezimbalwa zangaphakathi nangaphandle ezona ndlela zilungileyo zonxibelelwano iya kubonelela ngesiseko esiqinileyo sokukhula kwexesha elizayo.
Qaphela ixabiso lezoNxibelelwano loLuntu -Ilizwi lomlomo kunye ne-tweeting zivelisa umdla kwaye ziyinxalenye ebaluleke kakhulu ekushumayeleni abathengi beetekhnoloji banamhlanje. Kodwa inkqubo yemveli ye-PR inokufikelela kubahlalutyi kunye nabahleli abanabaphulaphuli abakulungeleyo nabathembekileyo babafundi. Xa umhleli tweets okanye ebhala inqaku kwinkampani yakho, kunokubakho amawaka ukuya kumashumi amawaka aya kuyibona. Abahlalutyi beshishini kunye nabahleli bakwanedumela lokuba ziingcali zeenjongo. Ukuqinisekiswa komntu wesithathu kwisisombululo sakho kuthwala ubunzima ngaphezu kokuzimela ngokwakho. Bandakanya ingcebiso kumaphephandaba onamava kwicandelo lakho lemveliso. Sebenzisa amava abo kwaye waziswe kwiingcali ezigubungela iimveliso ezifana nezakho. Ukuphembelela aba baphembeleli ngohlaziyo lwentengiso, ukutsha kwetekhnoloji kunye nemiyalezo enxulumene neendlela zeshishini. Zama ukwakha ubudlelwane bexesha elide kunye nabezindaba kwaye ufumane ukuqonda ukuba bafuna ntoni ukuze bavelise umxholo wopapasho.
Vavanya umyalezo wakho wequmrhu ngokuchasene neembono zangaphandle kunye nophando - Musa sela i-koolaid kwaye wamkele ngokungaboniyo umbono wolawulo lwakho ngehlabathi. Ukwamkela intetho yangaphakathi ethembisa ukuba imveliso yakho "iya kuba yeyokuqala, eyahlukileyo, egqwesileyo, kunye nabathengi abakhelwe ukuthenga" ngokuqinisekileyo ngekhe kungqinelane nenyani kwaye kufanele kuvavanywe. Nangona idosi esempilweni yethemba kukuthengisa konke, ungakuhoyi okunye okwenzekayo kwindawo yentengiso. Nyaniseka. Ukuba awunguye owokuqala kwaye ungoyena ulungileyo- ungayakhi loo nto kwigolide yakho. (Kukwakho negama lesilumkiso: Lumka ungasebenzisi ii-akhronimi ezininzi kunye namagama angabonakaliyo.) Nciphisa izinto ezibalaseleyo- ngaphakathi nangaphandle. Bulletproof umyalezo wakho kunye nabahlalutyi beshishini kunye neengcali eziqhelekileyo kukhuphiswano lwakho kunye nemarike odlala kuyo. Imveliso nganye okanye inkonzo inokhuphiswano lohlobo oluthile- inkampani ayinakuba yinkokheli kudidi olunye. Ucelomngeni kulawulo lokuvelisa iinyani, uphando kunye noqikelelo lokuxhasa ukusebenza kwemephu yendlela. Injongo eqhelekileyo kukuba inkampani iphumelele.
Khuthaza unxibelelwano phakathi kwamaqela obuchwephesha kunye noshishino kumbutho wakho Izixhobo ekuqalisweni zoluliwe kodwa thintela isilingo sokuhlukanisa iqela lakho lophuhliso lwemveliso ebantwini (ngesiqhelo ukuthengisa kunye nentengiso) abathetha nabathengi bakho bexesha elizayo. Abaphuhlisi bobuchwephesha ngamanye amaxesha bangena ekuphuhliseni itekhnoloji "epholileyo" ngaphandle kokuqinisekisa ukuba i-gizmo yamva nje yinto umntu afuna ukuyihlawulela. Iitekhnoloji ezivelisa iimveliso kwisithuba ngaphandle kokugxila kwiimfuno zentengiso kunye namathuba ziya kuthi zivelise imveliso engazukuyazisa inkampani njengoko kulindelwe. Khuthaza ingxelo evela kwintengiso kunye nentengiso kwiqela lophuhliso kunye nokujonga imeko zeshishini ukuze zilungelelanise imephu yendlela kunye neemfuno zexesha elizayo.
Xhobisa abasebenzi ngezixhobo ezifanelekileyo ezifunekayo ukunxibelelana ngokufanelekileyo kwiminyaka ye-elektroniki Unxibelelwano olusebenzayo lufuna okungaphezulu kuneselfowuni kunye neakhawunti ye-imeyile. Iinkampani kufuneka zisete imigaqo-nkqubo kunye nemigangatho yeentlanganiso zekhompyuter, ukuthumela imiyalezo kwangoko kunye neendlela zenkomfa. Ukuxhobisa abasebenzi ngesoftware kunye nezixhobo ezifunekayo kunxibelelwano olungenamthungo kugcina abasebenzi behambelana kwaye benemveliso. Ukusetyenziswa kwephakheji yentlanganiso yesoftware (egcwele ulwazi lokungena) kufuneka ifumaneke kubo bonke abacwangcisa iintlanganiso. Imigca yenkomfa kunye neepassword ezinxulumene noko kufuneka zaziwe kwaye ziqulathe imigca yendawo eya kumazwe abandakanywa rhoqo. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho kufuneka kubekho indawo yogcino lwedijithali apho abasebenzi banokuthumela unxibelelwano lwangaphakathi olufana nemikhombandlela yecandelo ebandakanya iindlela zonxibelelwano zomntu wesithathu kunye neenombolo zeselfowuni. Misela imigangatho nezikhokelo zonxibelelwano lwangaphakathi nolwangaphandle. Ifuna ukuba iifowuni zibuyiswe kwaye ii-imeyile ziphendulwe njengenxalenye yomgaqo-nkqubo onoxanduva.
Ukongeza ezi ndlela zilungileyo zonxibelelwano kuqaliso lobuchwephesha kuya kunceda ekuqinisekiseni impumelelo njengoko iqela lakho likhula kwaye lijongana nemiceli mngeni yokuhambisa izimvo ezintsha kunye neemveliso kwintengiso.
Jan 7, 2011 kwi-3: 02 AM
Iposi enkulu, Uvuyo! Enkosi kakhulu ngokuzibandakanya nathi. Abanye abantu beendaba abatsha bawajongela phantsi amandla obudlelwane boluntu kodwa siyibonile isebenza kunye nabathengi bethu!